Oge Cambrian: njirimara, geology, ihu igwe, flora na fauna | Netwọk Mgbasa Ozi
N'ime oge Paleozoic anyị nwere ọtụtụ oge nke geological oge. Nkeji nke mbụ bụ nke Onye Cambrian. Ọ bụ nkewa nke usoro ihe omimi ala na nke mbụ n'ime oge isii nke oge Paleozoic. Ọ malitere ihe dịka 541 nde afọ gara aga wee kwụsị ihe dịka 485 nde afọ gara aga. Oge ọzọ bụ Ordovician.
N’isiokwu a anyị ga-elekwasị anya na njirimara niile, geology, ihu igwe, ahịhịa na ahịhịa nke oge Cambrian.
2 Oge Cambrian geology
3 Igwe ihu igwe Cambrian
4 Ndụ gbawara
Oge a nke echiche Paleozoic na-ebu ụzọ site n'inwe mmetụta dị ukwuu na mbara ala ụwa niile. A tụlere Cambrian ka ọ gafere naanị nde afọ 70, mana sayensị nwere ike idozi ya site na ozi sitere na ndekọ fosil. Alaka nke geology nke na-elekwasị anya na mgbanwe ndị a nke ụwa mbara igwe nwere kemgbe ebe e guzobere ya bụ geology.
Oge a dum na-enweta aha Cambrian site na aha sitere na Cambria. Aha a bu Latin nke Cymru nke putara Wales. Wales bụ taa ebe amatapụtara ihe izizi mbụ nke ụwa. N'akụkụ nke akuku ala a, enwere oke ntiwa ike nke ndu na nke izizi edere na akpukpo aru. Mkpụrụ ndụ multicellular mbụ nwere ike ịdị iche nke nwere mgbagwoju anya karịa sponges ma ọ bụ jelii.
Otu n’ime ihe ndị kachasị mkpa n’oge a bụ algae ahịhịa ndụ nke anaghị adịkarị milimita ole na ole n’ihi trilobites. Ndị otu trilobites a bụ otu ama ama ama ama ama ama nke nwere ike ịlanarị mkpochapụ abụọ. Nkpalite nke ndụ a na-akpọ mgbawa Cambrian na ọ bụ otu n'ime nnukwu ihe merenụ nke gosipụtara ókè dị n'etiti Neoproterozoic na oge Cambrian.
Oge Cambrian geology
N'oge a, a na-eche na kọntinent ndị a bụ nkewa nke oke ala buru ibu nke dịrịworị Neoproterozoic na nke a na-akpọ Pannotia. Mpempe akwụkwọ buru ibu nke nnukwu ala bụ Gondwana ma dị na ndịda ya na obere kọntinent atọ a na-akpọ Laurentia, Siberia na Baltic. Kọntinent ndị a na-na-aga ugwu n'ihi ngagharị nke Efere Tectonic nke a na-akpali site na convection ugbu a nke uwe elu ụwa.
Nke a bụ otú ebugharị nke kọntinent si malite ịmalite ọnọdụ anyị maara taa. A na-eme atụmatụ ọnụọgụ kọntinent nke oge Cambrian ka ọ dị oke njọ ma e jiri ya tụnyere oge ndị gara aga. Nke a pụtara na e nwere nnukwu ọrụ nke efere tectonic. N'ihi mmegharị nke kọntinent a, ọ ga-ekwe omume ịbawanye ọtụtụ ụdị dị iche iche na mbara ụwa ebe ọ bụ na e kere eke dị iche iche nwere agwa dị iche iche.
Oke osimiri Panthalassa bụ nke kpuchiri elu ụwa dum, ebe a hụrụ obere osimiri ndị ọzọ dịka proto-Tethys na Khanty oké osimiri n’etiti mmiri nke obere kọntinenti a na-akpọ Laurentia na Baltic.
Igwe ihu igwe Cambrian
E kwenyere na ihu igwe nke oge Cambrian dị ọkụ karịa n'oge gara aga. N'oge a enweghị afọ ice na mkpara. Nke ahụ bụ, ọ dịghị osisi ala nke ice kpuchiri. N’aka nke ya, e kewara oge Cambrian n’oge: Lower Cambrian, Middle Cambrian na Upper Cambrian. Anyị ga-enyocha ihu igwe na geology na nkenke oge ọ bụla nke oge a.
Obere Cambrian: N’oge a, mpaghara ndị Gọvanọ na ala ndị ọzọ pere mpe biri na mpaghara ụwa niile. A mara nke a site na ndekọ nke ebe a na-etinye limestone na oke osimiri na epicontinental nke ebe okpomọkụ. N'oge ahụ, Cadomian orogeny bụ ihe butere oge mmalite nke nnukwu ala buru ibu na mmalite nke Cambrian.
Middle Cambrian: n'oge a na e nwere a mmebi okirikiri na-etre site abụọ regressive usu.
Oke Cambrian: Akụkụ buru ibu nke kọntinent nke Gondwana, nke nwere ọnọdụ ndị ọzọ karị, na-agagharị na latitude oyi. A nọchiri ha n'ọnọdụ ebe ndị obere kọntinent dịka Laurentia, Siberia na Australia nọ na-anọ n'ọchịchị.
Dika anyi kwurula na mbu, oge amara na obu oge nkewa ebe enwere ntiwapu nke ndu karia ka achuru. A maara ya dị ka mgbawa Cambrian. Mgbawa a mere ka ụdị ihe dị iche iche dị iche iche dị na mbara ụwa pụta nke gụnyere ọtụtụ ìgwè anụmanụ anyị maara taa.
N'ime anụmanụ ndị a pụta, anyị na-ahụ ihe egwu dị na ya yana nke ụmụ mmadụ. Amabeghị n’ezie etu oke ọkụ si nwee ike ịgba ọkụ. Ekwenyere na ọ nwere ike bụrụ ikuku oxygen nke dị ugbu a na mbara igwe yana na, n'ihi nsị nke cyanobacteria na algae nke mere fotoynthesis, ọ nwere ike iru ọkwa dị mkpa maka ihe niile dị ndụ iji too ha. ihe mgbagwoju anya di iche iche na enye otutu ndu.
Akụkụ ọzọ ị ga-echebara echiche bụ gburugburu ebe obibi nke mere ka ọ dịkwuo mma ile ọbịa ka ihu igwe dị ọkụ na oke osimiri dị elu. N'ụzọ dị otú a, e kere ebe obibi mmiri dị omimi nke dị mma maka ịmepụta ụdị ndụ ọhụrụ ebe ọ bụ na e nwere nnukwu nri.
Otú ọ dị, a na-eche na ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị ha ekwubiga okwu ókè banyere ịdị ukwuu nke mgbawa Cambrian n'ihi ịba ụba nke ụmụ anụmanụ nwere usoro siri ike nke mebiri ngwa ngwa na ngwa ngwa karịa ndị bu ha ụzọ. Site na ihe ndị a niile ị nwere ike ịnweta naanị akwụkwọ ndekọ na-adabere n'ụdị ahụ. Ọ bụrụ na ahụ dị nro, enweghị ike ịme ya n'otu ụzọ ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ ihe amaara banyere brachiopods nke biri na klam - na shells na anụmanụ ndị ọzọ na-egosipụta ọkpụkpụ ndị a na-ahụkarị nke a maara taa dịka arthropods.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere oge Cambrian.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oge Cambrian